Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid-19 : 75% ny olona marary no sitrana
Nanambara ny mpitondra tenin’ny CCO (foibe sy fibaikona sy fandrindrana ny ady amin’ny covid-19) ny profesora Vololontina Hanta marie Danielle omaly alatsinainy faha 03 aogositra 2020 fa ny 75% ny olona marary dia efa sitrana avokoa. Raha ny tarehi-marika ofisialy nivoaka tamin’io fotoana io dia nahatratra 11 660 ny isan’ny olona nitondra ity otrikaretina “coronavirus” na “covid-19” ity teto Madagasikara hatramin’ny faha 19 martsa 2020, ka hatramin’ny alatsinainy faha 03 aogositra 2020. Nahatratra 8 825 ny olona sitrana, 118 ny olona maty. Raha ny olona nitondra ny otrikaretina omaly indray dia miisa 132 izy ireo, ny marary sitrana indray dia nahatratra 381.
Raha ireo tarehi-marika ireo no asian-teny dia azo lazaina fa misy fivoarana any amin’ny tsaratsara hatrany ny ady ataon’ny vahoaka Malagasy amin’ity aretina mandoza ity. Ny filaharana misy an’i Madagasikara aty Afrika dia ny laharana faha 11 amin’ny olona voan’ny covid-19, raha ny voalazan’ny sehatra iraisam-pirenena. Midika inona hoan’ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina iny tarehi-marika omaly iny?
Raha ampitahana amin’ny amin’ny tarehi-marika tamin’ny herinandro farany ny volana jolay 2020 iny izy ity dia hita fa mihena ny isan’ny olona voan’ny aretina ity. Aza hadino fa efa tafakatra hatrany tany amin’ny 600 ny isan’ny olona nitondra ny otrikaretina tao anatin’ny iray andro. Tenenina manokana ny tranga misy eto Antananarivo satria tao anatin’ny iray volana izay dia teto no tena tranobe nitobian’ny valanaretina ity sy tena voa mafy ary nifaharany. Tombanana hatrany amin’ny 95% ny olona mitondra ny otrikaretina dia avy eto Analamanga avokoa raha ny tranga misy manerana an’i Madagasikara manontolo no atao kajikajy . Eto koa no misy olona maty be dia be indrindra. Azo lazaina fa misy fahombiazana ny tolona izay tarihin’ny fanjakana ankehitriny. Raha io tarehi-marika milaza ny fahasitranana io no fakafakaina. Na izany aza dia mbola tsy ampy satria mbola misy 25% no tsy voafehy. Ka ny fitadiavana vaha olana amin’io 25% izay tokony ho tratrarina io no tokony himasoan’ny fanjakana fatratra satria mety hiverina hiakatra indray io amin’ny fotoana tsy voafetra raha toa ka tsy hita izany olana izany. Azo lazaina fa isan’ny ahazoana vokatra amin’ity raharaha ity ny mahakasika ny fanafody izay ampiasain’ny fanjakana dia ireo fitsaboana maoderina avy any ivelany sy ny raokandro Malagasy dia ny tambavy Malagasy sy ny raokandro ka ny CVO izay mampalaza an’i Madagasikara no isan’ny tena zava-dehibe amin’izany. Eo ihany koa ireo fihibohana sy ny fepetra maro isan-karazany izay tanterahana eto amintsika. Raha izay no tarehi-marika amin’ny fomba ofisialy dia tsy azo lazaina fa io no tena zava-misy marina eto amin’ny firenena. Maro dia maro no olona tsy mandeha any amin’ny hôpitaly intsony fa mamonjy ny dokotera tsy miankina. Misy koa ireo izay mijanona amin’ny fitsaboana nentim-paharazana na ny raokandro Malagasy. Iarahana mahita fa maro no tokantrano manao ny “evoka” amin’izao fotoana izao ka mampiasa ny ravin-kazo isan-karazany fa indrindra ny ravintsara sy ny kininim-potsy. Toa izany koa ny tohak’afo izay isan’ny fomba fiadiana amin’ny aretina sery sy ny tazo ary ny aretina hafa koa natao ny Malagasy isan-trano taloha. Marina fa tsy voaporofo ara-tsiansa sy medikaly ireo, nefa dia maro no salama noho izany ny Malagasy fa indrindra ireo any ambanivohitra. Ny tarehi-marika avoakan’ny CCO ireo dia ny tonga manao fitiliana ihany eny amin’ny toerana izay iandraiketan’ny fanjakana. Tsy afaka ilazana tanteraka ny zavamisy marina izy ireo nefa kosa dia zava-dehibe eo amin’ny fivoaran’ny aretina ity ireny tarehimarika ireny. Raha toa ka mitohy ny fivoaran’ny aretina tao anatin’ny herinandro lasa teo iny ka hatramin’izao ka manaraka tsara ny toromarika ny vahoaka Malagasy ary miezaka mafy ny fanjakana dia azo antenaina fa tsy maintsy misy vokany tsy ho ela ity ady amin’ny covid-19 ity.